रगतमा कालो ‘सिन्डिकेट’
–तिलक घिमिरे ‘निर्मल’
बाल्यकालदेखि सुनिँदै आएको नारामध्येको एक नारा हो– रक्तदान जीवनदान ! जीवनमा गर्नेमध्ये सबैभन्दा पुण्यको दान भनेकै रक्तदान हो रे ।
यी र यस्ता इमोसनल स्लोगन दिएर नेपाल सरकारमा बहुतै पकड जमाउन सफल एक एनजिओले गाउँ, सहर, पहाड, पर्वत, हिमाल, तराई, विद्यालय, कलेज विभिन्न कार्यालयहरुमा वर्षको एकपटक रक्तदान गर्न चिल्ला–मीठा भाषण गरेर प्रोत्साहन गरे ।
बेनिफिटको शब्दलाई लुप्त राखी कसैको जीवन बचाउनका लागि तपाईंहरुको प्रत्येक ३–३ महिनामा खेर जाने सेलको दानले एक जनाले जीवन पाउँछन् भन्ने इमोसनल भाव दर्शाई ब्लड डोनेसन गराउन सफल भएका छन् । पक्कै पनि हाम्रो खेर जाने रगतले अरुले आफ्नो जीवन बचाउन पक्कै सक्छन् ।
यदि रक्तदान नगर्ने हो भने सबै हस्पिटलमा बिरामीहरुको असीमित मृत्यु हुन्छ । यो ध्रुव सत्य हो कि रगतविना अपरेसनलगायतका उपचारमा खतरा उच्च हुन्छ, तसर्थ रक्तदान अनिवार्य हो । तर, यहाँ उल्लेख गर्न खोजेको चाहिँ रक्तदान गराउने संघसंस्थाहरुमा लुकेको भित्री पाटो अर्थात् रगतको कालो धन्दाको हो ।
अहिले जताततै सहरबजार, हाट, मेलापात, चिया चौतारी, चमेना गृह, कार्यालय, कलेज, विद्यालयदेखि खेत खलिहानसम्म सुनिँदै आएको शब्द हो ‘सिन्डिकेट’ । अबको ध्यान भनेको तरकारी, खाद्यान्नमा रहेको एकाधिकार तोडी सबै प्रकारको सिन्डिकेटको अन्त्य गरी ‘सुखी नेपाल समृद्ध नेपाल’ को अभियानलाई पूर्ण रुप दिने भनेर वाम सरकारले गरेको वाचा र अघि सारेको प्रतिबद्धतालाई अब रगततिर ढल्काउनुपर्ने अपरिहार्य आवश्यकता भएको छ ।
जसरी सार्वजनिक सवारीसाधनमा, तरकारीमा, खाद्यान्नमा, इन्धनमा सिन्डिकेट छ, त्यो सबैभन्दा बढी संवेदनशील सिन्डिकेट भनेको स्वास्थ्य क्षेत्रमा रहिरहेको हामी देख्न सक्छौँ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा रहेको विद्यमान सिन्डिकेटमध्ये बिरामीहरुलाई आवश्यक पर्र्र्र्ने रगत आपूर्ति गर्ने निकायसँग सम्बन्धित एकाधिकारको बारेमा यहाँ उल्लेख गर्न गइरहेको छु ।
म रक्तसम्बन्धी एक जना बिरामी भएको घरको सदस्य हुँ । हामीले विगत ५ वर्षदेखि काठमाडौँको एक अस्पतालमा बिरामीको उपचार गराइरहेका छौँ । हामीलाई प्रतिमहिना नै रातो र सेतो गरी औसतमा ६–७ प्याकेट रगत आवश्यक पर्ने गर्दछ । नेपालका ठूल्ठूला अस्पतालहरुले पनि ९९% रगत व्यवस्थापन गरेका हुँदैनन् । जब रगत आवश्यक भएको प्रेस्क्रिप्सन डाक्टरले काटिदिन्छन्, अनि सुरू हुन्छ रगत व्यवस्थापन गर्ने चिन्ता ।
किनकि, रेडक्रसबाहेक अरु कसैले यो संकलन गर्न नपाइने भएर होला उसको रगतमा एकाधिकार भएको र रेडक्रसका पनि शाखा कार्यालयहरुमा बडो मुस्किलले रगत पाउन सकिन्छ । सबै रगत पाइने एकमात्र स्थान भनेको रेडक्रसको केन्द्रीय कार्यालय हो, जुन कार्यालय भूकम्पअघिसम्म काठमाडौँ प्रदर्शनीमार्गमा थियो ।
तर, जब भूकम्प गयो तब उसले कार्यालय ललितपुर च्यासलभन्दा पर खोलाको मसानघाटछेउमा रहेको घर भाडामा लिएर सञ्चालन गरिरहेको छ । भृकुटीमण्डपनजिक कार्यालय हुँदा कम से कम दिनभरि र साँझसम्म त सार्वजनिक सवारीसाधनको सुविधा पाइन्थ्यो, तर जब सो मसानघाटनेर सुरू गरियो तब न त्यो ठाउँमा कुनै सार्वजनिक यातायात सञ्चालन हुन्छ, न त नौलो ठाउँका बिरामीका मानिसहरु सजिलै पुग्न नै सक्छन् । अत्यन्तै एकान्तमा रातको समयमा महिला, केटाकेटीहरु सो ठाउँमा हिँड्न समस्या, पुग्न समस्या हुन्छ ।
डाक्टरले दिएको प्रेस्क्रिप्सनअनुसारको कागज र अस्पतालमा २००० भन्दा बढी धरौटी राखी ल्याएको भाडा बोकी आउँदा ९९% ले प्रथम आगमनमा रगत नपाइने, उता अस्पतालले ‘अपरेसन गर्न बिरामीलाई रगत अर्जेन्ट छ, चाँडो ल्याउनुहोला’ भनेको हुन्छ, तर जब रेडक्रसमा पुगिन्छ रगत पाइँदैन ।
बिहान ८ः०० बजेतिर पुगेका सेवाग्राहीहरुलाई ‘साँझको ६ः०० बजेपश्चात् मात्र आउनू, तर निश्चिन्तरुपमा ढुक्क भएर नआउनू’ भनेर निराशावादी उत्तर दिएर बिरामीका आफन्तलाई हतोत्साह पार्ने शब्दले बोल्छन् ।
भन्नलाई तथा देखाउनका लागि त एक कोठामा परामर्श कक्ष भनेर एक ठाउँ पनि राखिएको देखिन्छ, तर परामर्श भनिएता पनि त्यहाँ बस्ने परामर्शदाताको शैली यति रूखो हुन्छ कि संसारमा सबैभन्दा रूखो र तुच्छ व्यवहार गर्ने मानिसहरु काउन्सिलरका रुपमा त्यहाँ रहेका हुन्छन् । जुन व्यवहार देख्दा लाग्छ कि काउन्सिलिङ भनेको मनको कुरा बुझेर सहानुभूति दिनुपर्नेमा मनमा झन् पीडा दिएको हामी देख्न सक्छौँ ।
अस्पतालले कुनै पनि बिरामीको गम्भीर प्रकृतिको अवस्था नआई रगत माग गर्दैन । अनि, बिरामीका आफन्त पनि सोहीअनुसारको तनावमा हुन्छन् । तनावको समयमा टाढा–टाढाको अस्पतालबाट त्यस अनकन्टार, निर्जन स्थानमा पुग्दा जोकोही केही आत्तिएर बोल्नु स्वाभाविक नै हो ।
यो समयमा बिरामीका आफन्तहरुलाई त्यहाँका काउन्सिलर, कर्मचारीहरुले ढाढस दिनुपर्नेमा टर्रो बोलीबचनले व्यवहार गर्दा सेवाग्राहीहरुको प्रत्येक दिन कुँडिएको मन हामी केन्द्रीय रक्तसञ्चार केन्द्रको प्राङ्गणमा देख्न सक्छौँ ।
त्यहाँ रगत जति उपलब्ध हुन्छ, त्यतिमात्र वितरण गर्नु स्वाभाविक भएता पनि घन्टौँदेखि लाइनमा बसिरहेकाहरु लाइनमै हुन्छन्, तर पहुँचवालाहरु विनाकुनै लाइन सरर आई लिएर जान्छन् ।
बिरामी सबैका उत्तिकै मूल्य र मान्यताका हुन्छन् । गाम्भीर्यताका आधारमा बिरामीहरुका लागि रगतको व्यवस्था गराउनुपर्नेमा रेडक्रसले व्यक्तिगत पहुँचका आधारमा रगत उपलब्ध गराइरहेको देख्दा लाग्छ, रक्तदान जीवनदानको नारा केवल इमोसनल ब्ल्याकमेलिङभन्दा अन्य होइन ।
सरकार वा राज्यले बिरामीहरुका लागि निःशुल्क उपलब्ध गराउने भनेको रगत टेस्टको नाममा अनेक–अनेक शीर्षकमा रगतलाई लिएर अस्पताल र निर्देशनको आधारमा रेडक्रसले पैसा असुल गरिरहेको छ ।
विभिन्न परीक्षणको नाममा ब्लड बैंकमै पैसा धुतिन्छ र सो रगतलाई अस्पताल ल्याइपु¥याएपछि पुनः क्रस–म्याचको शीर्षकमा अर्कोपटक पुनः पैसा तिराइन्छ ।
यसरी राज्यले निःशुल्क तोकिदिएको अत्यावश्यकीय वस्तुमा कुनै एक संस्थाले सिन्डिकेट लगाउनु र मनलागीरुपमा पैसा असुल गर्नु त्यो पनि बिल नै काटेर, त्यसलाई हामी के भन्न सक्छौँ ? रेडक्रसको मर्जी यति चढ्दो अवस्थामा छ कि त्यो सेवा प्रदायक संस्था नै होइन भन्ने अवस्था आएको छ ।
त्यहाँ रातो रगतको कालो धन्दा गरिरहेका मान्छेहरु बग्रेल्ती भेटिन्छन्, जसले कसैलाई टेर्दैनन् । उनीहरुको हैकम यति धेरै देख्न सकिन्छ कि मानौँ उनीहरु आफैँले सरकार सञ्चालन गरिरहेका छन् ।
पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको कार्यकालका स्वास्थ्यमन्त्री गगनकुमार थापाले स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधारका प्रयास गरेका थिए । उनको प्रयासलाई पक्ष-विपक्ष सबैले प्रशंसा गरेका थिए ।
रक्तदान गरिएको रगत निःशुल्क बिरामीसम्म पुग्नुपर्दछ भनेर थापाले सो समयमा पहलकदमी गरेका थिए, तर छोटो समयमै सरकार ढलेको कारण सो काम पूरा हुन सकेन । त्यसपछिका स्वास्थ्यमन्त्री अधिकांश समय विनाविभागीय अर्थात् जिम्मेवारविहीन भएर रहनुप¥यो ।
नयाँ स्वास्थ्यमन्त्रीले रगतमा रहेको यस प्रकारको एकाधिकार र बिरामीलाई परिरहेको मर्कालाई बुझिदिएमात्र पनि लाखौँलाख बिरामीले राहत महसुस गर्नेथिए ।